रातारात फेरियो योगेशको बोलि, किन गरे एकाएक ओलिको प्रसंशा? - News20 Media
रातारात फेरियो योगेशको बोलि, किन गरे एकाएक ओलिको प्रसंशा?
May 30, 2021 N20LeaveaComment on रातारात फेरियो योगेशको बोलि, किन गरे एकाएक ओलिको प्रसंशा?
केही दिन पहिले माधव नेपाल समुहमा रहेर प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको चर्को आलोचना गर्दै आएका एमाले नेता योगेश भट्टराई यटत बेला ओलिको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्न लागेका छन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको विभिन्न तह र तप्काबाट विभिन्न खाले टिप्पणी भईरहेका छ । तर पूर्वमन्त्री भट्टराईले हिजो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट मुलत जनमुखी भएको बताएका छन ।
पार्टीको आन्तरिक विवादलाई मध्यविन्दुबाट मिलनको बाटो खोज्दै बस्नुभएका नेता भट्टराईले सरकारले अध्यक्षदेशबाट ल्याएको बजेट एमालेको निर्वाचनको समयमा गरिएको घोषणापत्रको सारमा रहेको संकेत गरे । उनले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति रहेता पनि वर्तमान समयको लागि बजेट उत्साहजनक तथा जनमुखी भएको बताए। केही समय अघिसम्म माधव कुमार नेपाल समूह रहेका नेता भट्टराई पछिल्लो समय कुनै पनि समूहमा नभई मध्यविन्दुमा बसेर आफ्नो गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेका छन ।
माधव समूह, कांग्रेस, माओवादी तथा जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले बजेटको विरोध गरिरहेको समयमा नेता भट्टराईले भने बजेटको खुलेरै प्रशंसा गरे । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘अर्थमन्त्री माननीय बिष्णु पौडेलले हिजो सार्वजनिक गर्नुभएको आब २०७८र ७९ को बजेट मुलतस् जनमुखी छ ।
हरेक बजेटका चुनौती जस्तै यो बजेटका पनि कार्यन्वयन, पुंजिगत खर्च कम हुने, राजनीतिक र प्रशासनीक नेत्रीत्वमा ईच्छाशक्तिको कमी, राजश्वको लक्ष नभेटाउने, राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रगति नहुने लगायतका चुनौती भने यो बजेटका सामु पनि बिध्यमान छन् । यी चुनैतीमाथि बिजयप्राप्त गर्न अर्थमन्त्रीजीलाई सफलता मिलोस ।’ उनले भनेका छन ।
सम्धी झालाई मन्त्री बनाउने महन्थ ठाकुरको तयारी, ठाकुर कित्ताबाटै मन्त्री बन्न ४ सांसद छोड्दै